LOGAN – Mood for Movies
“Nature made meafreak.
Man made meaweapon.
And God made it last too long.”
မင်းတို့Logan လို့ သိကြတဲ့ ငါ့ကို James Howlett ဆိုတာ ငါ့နာမည်အရင်းလို့ဘယ်သူတွေက သိခဲ့ကြမှာလဲ။ ငါဟာ မင်းတို့ထင်နေကြတဲ့ စွမ်းအားရှင်သူရဲကောင်းတစ်ယောက် မဟုတ်ဘူး။ ငါဟာ လူ့ဘဝရဲ့ကျန်စာသင့်နေခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ပဲ။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကတည်းက ထိုကျိန်စာက ငါ့ကို အနိုင်ယူခဲ့တယ်။ ငါဒီဘဝကြီးကို မလိုချင်ဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဘဝအသစ်တစ်ခုကို စတင်လိုက်ချင်တယ်။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ငါ့ဆန္ဒတွေ ပြည့်ဝတော့မယ်ဆိုတာ ငါအလိုအလျောက် သိနေခဲ့တယ်။
ငါ့လက်ကြားထဲက ထွက်လာတဲ့ ထိုအရိုးတွေကို ငါမုန်းတီးတယ်။ စက်ဆုတ်ရွံရှာတယ်။ သွေးတွေပေကျံနေတဲ့ ထိုအရိုးတွေဟာ တစ်ပါးသူတွေရဲ့သွေးတွေကို ဆာလောင်နေသယောင်ပင်။ ဒီအရိုးတွေဟာ ငါ့အတွက် ကျိန်စာတွေပဲ။ ဒီကျိန်စာတွေနဲ့ငါဟာ ငါ့ဖခင်အရင်းတစ်ယောက်လုံးကို သတ်ပစ်ခဲ့မိတယ်။ ပြန်ပြင်လို့မရတော့တဲ့ထိုအမှားတွေဟာ ငါ့ကိုလူဆိုးလူမိုက်လူကြမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် တွန်းပို့ပေးခဲ့ကြတယ်။
“ဒီလိုနဲ့သဘာဝတရားက ငါ့ကို ကြောက်မက်ဖွယ်လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ဖန်တီးခဲ့တယ်။ “
ဘယ်သူတွေသိမှာလဲ။ ငါ့ကို 1830 ကျော်လောက်က မွေးဖွားခဲ့တယ်ဆိုတာ။ ငါ အသက်တွေကြီးနေပြီ။ နှစ်ပေါင်း 200 နီးပါးအတွင်း လူသားတွေရဲ့လောဘတွေ၊ ဒေါသတွေကို ငါမြင်တွေ့ခဲ့ပြီးပြီ။ အချိန်တွေကိုတောင် ဖြတ်ပြီး ငါဟာ ခရီးသွားခဲ့ဖူးပြီ။ ဒါပေမဲ့အခုတော့ ငါ့အနားကလူတွေ မရှိကြတော့ဘူး။ ငါချစ်တဲ့သူတွေရဲ့နိဂုံးတွေကို ငါမြင်တွေ့ခဲ့ပေါင်းလည်း များခဲ့ပြီ။ သူတို့တွေရဲ့ထွက်ခွာသွားချိန်တွေမှာ ငါ သူတို့နဲ့လိုက်သွားချင်တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဒီကျိန်စာကြီးမပျယ်သေးသရွေ့ငါဟာ အသက်ဆက်ရှင်နေရအုံးမယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ငါချစ်တဲ့ လူတွေ တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက်ရဲ့နေဝင်ချိန်တွေကို ငါ့ဆန္ဒတွေမပြည့်မဝမချင်း ငါရင်နာနာနဲ့ဆက်ကြည့်နေရအုံးမယ်။
ငါ့ဘဝမှာ တိုက်ပွဲတွေများစွာကို ကြုံတွေ့ခဲ့တယ်။ ပြည်တွင်းစစ်တွေလောင်မြိုက်နေခဲ့တဲ့ အမေရိကားမြေကို ငါနင်းခဲ့ဖူးတယ်။ ကမ္ဘာစစ်တွေကြားထဲမှာ ရန်သူတွေရဲ့အသက်ဇီဝိန်ပေါင်းများစွာတွေကို ငါခြွေခဲ့ဖူးတယ်။ ဗီယက်နမ်တွေရဲ့မြေပေါ်မှာလည်း ငါတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်။ ကြာခဲ့ပြီပေါ့ကွာ။ ငါ့ဘဝမှာ တစ်ကောင်ကြွက်ဘဝနဲ တိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်လို နေခဲ့ရပေမဲ့ ငါချစ်တဲ့ Kayla ကို သူတို့သတ်ပစ်ခဲ့ကြတယ်။ ငါ့ခန္ဓာထဲက အရိုးတွေကိုလည်း adamantium ဆိုတဲ့ ဖျက်ဆီးလို့မရနိုင်တဲ့ သတ္တုတစ်မျိုးနဲ့အစားထိုးမွမ်းမံခဲ့ကြတယ်။
“ဒီလိုနဲ့လူသားတွေကငါ့ကို လူသတ်ကောင်အဖြစ် သူတို့ပုံစံသွင်းခဲ့ကြတယ်။”
ငါဟာ တစ်ကယ် လူသတ်ကောင်လား။ လူသားတွေရဲ့အသက်တွေကို မျက်တောင်မခတ်ပဲ ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်နိုင်တဲ့ လူတစ်ယောက်လား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် .. William Stryker .. မင်းဟာ ငါ့ဘဝရဲ့အဆိုးဆုံးလူသားတစ်ယောက်ပဲ။
ဒီလိုနဲ့ငါ့ဘဝရဲ့မိသားစုလို့ခေါ်ထိုက်တဲ့ လူတစ်စုကို ငါ့ဘဝမှာတွေ့ခဲ့ရတယ်။ ငါလျှောက်နေခဲ့တဲ့ လမ်းမှားတွေပေါ်ကနေ သူတို့ငါ့ကိုကယ်တင်ခဲ့ကြတယ်။ Charles Xavier ဆိုတာ ငါ့ဘဝမှာ နောက်ထပ်ရှိမလာနိုင်တော့တဲ့ အစားထိုးမရတဲ့ လူသားတစ်ယောက်။ ဘယ်သူတွေ သိခဲ့ကြမှာလဲ။ သူနဲ့ငါဟာ အခုအချိန်ထိ အတူတူ ရှိနေခဲ့ကြမယ်ဆိုတာ။ ငါကိုယ်တိုင်တောင် အဲ့ဒီ့တုန်းက မသိခဲ့ဘူး။ ငါ့ဘဝရဲ့ဆရာတစ်ယောက်လို့လည်း ဆိုထိုက်သလို ဖခင်တစ်ယောက်လို့လဲ ပြောလို့ရတယ်။ ငါ့အမှားတွေကို သူသိခဲ့တယ်။ ငါ့အပြစ်တွေကို သူနားလည်ခဲ့တယ်။ ငါ့ဘဝကို သူကယ်တင်ခဲ့တယ်။ အကယ်၍ ငါသာ သူနဲ့ဘဝမှာ မတွေ့ဆုံနိုင်ခဲ့ရင် ဘယ်လောက်ထိများ တိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်လို ဆက်သွားနေမိမယ် မသိဘူး။ ငါမှတ်မိသေးတယ်။ သူနဲ့ငါစတွေ့တုန်းက သူ ငါ့ကို စတင်ပြောခဲ့တဲ့ စကားက
“I'm Charles Xavier. Would you like some breakfast?” တဲ့။
ဒါဟာ ရက်စက်တဲ့လူကြမ်းကြီးတစ်ယောက်အပေါ် ပညာရှိတစ်ယောက်က ချိုသာတဲ့ စကားတစ်ခွန်းကို ဆိုခဲ့တာပဲ။
ထို့အပြင် Cyclops ဆိုတဲ့တစ်ယောက်က ငါနဲ့ပတ်သက်ပြီး မယုံကြည်ရတဲ့အကြောင်း၊ ငါဟာအမိန့်တွေကို နာခံမဲ့သူတစ်ယောက် မဟုတ်ကြောင်း Charles Xavier ကိုပြောတော့ Charles က သူဟာထိုက်တန်တဲ့အမိန့်တွေဆို လိုက်နာမဲ့လူစားမျိုးလို့ငါ့အပေါ်မှာ ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ပြန်ပြောခဲ့တယ်။ စိတ်ထဲက ကျေးဇူးတင်ခဲ့ပေမဲ့ ဟန်ဆောင်တတ်တဲ့ငါ့ရဲ့စိတ်အတိုင်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ငါမပြောမိဘူး။ အမှန်တော့ ငါ့ရဲ့ မသိစိတ်ထဲကနေ ထိုအချိန်ကတည်းက ငါ ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကို ယုံကြည်နေမိခဲ့တယ်။ သူဟာ တစ်ချိန်ချိန်မှာ ပူလောင်နေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို အေးချမ်းအောင် ပြောင်းလဲနိုင်မဲ့ တစ်ဦးတည်းသော လူသားလို့။ သူဟာခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဆိုတာထက် ပိုတယ်။ သူဟာ လူတိုင်းအတွက် မိတ်ဆွေကောင်းတစ်ယောက်ပင်။ ငါတို့ကြောက်ရွံ့နေတဲ့အချိန်မှာ ငါတို့ကိုခွန်အားတွေ ပေးစေတယ်။ ငါတို့တွေ တစ်ကိုယ်တည်းအထီးကျန်နေချိန်မှာတော့ ငါတို့ကို မိသားစုတွေ ပေးခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်လည်း Charles ကို ယုံကြည်ဖို့ Rouge ကို ငါပြောခဲ့တာပဲ။
ငါ့ကို မင်းတို့မြင်မှာက တိုက်ဖို့ခိုက်ဖို့သတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ပဲ ရတဲ့ အစွမ်းရှိတဲ့သူတစ်ဦးလို့။ ဟုတ်ပါတယ်။ မင်းတို့မမှားပါဘူး။ ငါ့မှာ ဒီ့ထက်ပိုသာတဲ့အစွမ်းမရှိဘူး။ ကုန်ကုန်ပြောရရင် ချစ်တတ်တဲ့နှလုံးသားတောင် မရှိခဲ့တော့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူမကို ငါစတွေ့ကတည်းက ငါ့စိတ်တွေ ပြောင်းလဲခဲ့တယ်။ ငါ သူမကို မချစ်သင့်ဘူး။ ဟုတ်တယ်။ ငါသူမကို အစကတည်းက မချစ်ခဲ့သင့်ဘူး။ ငါဟာ မရနိုင်တဲ့အချစ်တစ်ခုကို မျှော်လင့်ခဲ့မိသူတစ်ယောက်လား။ ဒီလောက်ထိတော့ ငါ့စိတ်ဟာ မနူးညံ့ခဲ့ပါဘူး။ သူမဟာ ငါ့အချစ်တွေကို အမြဲငြင်းဆိုခဲ့တယ်။ သြော် .. Jean Grey မင်းလည်း အခုတော့ သူများတွေနည်းတူ င့ါကိုစွန့်ခွာခဲ့ပြီ။ အမှန်တော့ မင်းစွန့်ခွာခဲ့တာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ငါကိုယ်တိုင်က မင်းကိုလောကကြီးကနေ အပြီးအပိုင် ထုတ်ပစ်ခဲ့မိတာ။ အဲ့ဒီ့နေ့ကအကြောင်းကို ငါပြန်တွေးမိရင် ငါရဲ့မာကြောတဲ့ နှလုံးသားဟာ နူးညံ့သွားသလိုပင်။ မင်းကို သတ်ခဲ့တဲ့သူက ငါကိုယ်တိုင်ပဲလေ။ ငါ့ရဲ့ဒီကျိန်စာ လက်အစွယ်တွေနဲ့ပဲ မင်းရဲ့နှလုံးသားကို ထုတ်ချင်းပေါက်အောင် ထိုးသတ်ခဲ့တယ်။ ငါ ဒီကျိန်စာလက်အစွယ်တွေကို အရမ်းမုန်းတီးနေမိပြီ။ ငါချစ်တဲ့သူကို သတ်ခဲ့တာလည်း ဒီကျိန်စာတွေနဲ့ပဲလေ။ ဒီအတိတ်ဆိုးတွေက ငါ့ကိုအခုထိ ခြောက်လှန့်နေတုန်းပဲ။ တစ်ခါ တစ်ခါ ငါညဘက်တွေ အိပ်မက်ဆိုးတွေကနေ လန့်လန့်နိုးနေတတ်တယ်။ ငါ့အိပ်မက်တွေထဲမှာ မင်းအမြဲပါနေခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အိပ်မက်တွေဟာ အမြဲလိုလို အိပ်မက်ဆိုးတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ်နေတတ်တယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ငါလန့်နိုးတိုင်း မင်းနာမည် Jean ကို ငါအမြဲခေါ်ခေါ်နေခဲ့တာပေါ့။ မင်းကတော့ ဘယ်သိနိုင်တော့မလဲကွာ။ လောကကြီးမှာ မင်းမှ မရှိတော့တာ။
ငါ့ကို တစ်ချိန်တုန်းက Yashida ဆိုတဲ့သူတစ်ယောက်က Ronin လို့ခေါ်ခဲ့ဖူးတယ်။ သခင် မရှိတဲ့ Samurai တစ်ယောက်တဲ့။ သူပြောတာကတော့ ငါဟာထာဝရ အသက်ရှင်နေမဲ့သူတစ်ဦး။ ဒါပေမဲ့ အသက်ရှင်ဖို့အကြောင်းပြချက်မရှိတဲ့ တစ်ယောက်တဲ့။ ဒါကို ငါပြန်တွေးတိုင်း ရယ်မောလိုက်ချင်တယ်။ ဘာတဲ့ ငါဟာ ထာဝရအသက်ရှင်နေမယ် ဟုတ်လား။ ဟား ..ဟား.. ငါ့ရဲ့နိဂုံးကို မင်းမမြင်ခင် မင်းရဲ့နိဂုံးကို ငါအရင်မြင်ခဲ့ရတာကိုး Yashida ရာ။ ဒါပေမဲ့ သူပြောခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံးစကားကတော့ မှန်ကန်လွန်းတယ်။ ဟုတ်တယ်။ ငါ့မှာ အသက်ရှင်နေစရာ အကြောင်းပြချက်ဆိုတာ မွေးကတည်းက မရှိခဲ့ဘူး။ လူတွေကိုသတ်ဖြတ်ဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ငါဟာမွေးဖွားလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ငါဟာ အသက်ဆက်ရှင်သန်ဖို့မသင့်တော့တဲ့ တစ်ယောက်ပဲ။ သူက ငါ့ကို လက်ဆောင်တစ်ခုပေးချင်ခဲ့တယ်။ ထိုလက်ဆောင်က သာမာန်လူသားဘဝနဲ့သေခြင်းတရားတဲ့။ ထိုအချိန်က ထိုလက်ဆောင်ကို ငါငြင်းဆန်ခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ငါ့နေ့ရက်တွေကို အခုလို ကုန်ဆုံးစေတော့တယ်။
အခုငါတို့နေထိုင်နေတဲ့ 2029 ဆိုတဲ့ ခေတ်ကြီးဟာ အမှောင်ထုတွေကြီးစိုးနေတဲ့ ခေတ်ပျက်ကြီးတစ်ခု။ ကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေ၊ မုန်းတီးခြင်းတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ လောကကြီး။ ငါတို့နဲ့မျိုးနွယ်စုတူတဲ့ Mutants တွေဟာ လောကကြီးမှာ မရှိတော့လောက်အောင်ကို ရှားပါးနေခဲ့ပြီ။ Mutants အသစ်တွေ မွေးဖွားမလာတော့တာပဲ 25 နှစ်ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီ။ ငါ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေ လောကကြီးမှာ မရှိကြတော့ဘူး။ လောကကြီးကနေ သူတို့အားလုံး ငါ့ကို နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပြီ။ သူတို့အားလုံး သေဆုံးသွားကြတဲ့ ထိုနေ့Westchester incident အကြောင်းကို ငါပြန်မတွေးချင်ဘူး။
“ဘုရားသခင်ဟာ ငါ့ကို ထိုကျိန်စာတွေနဲ့အခုထိ အသက်ရှည်စေခဲ့တယ်။ “
အခုတော့ Caliban နဲ့ငါ့မိတ်ဆွေကြီး Charles Xavier တို့ပဲ ငါ့အနားမှာ ရှိကြတော့တယ်။ ငါ့အသွေးအသားတွေထဲက adamantium သတ္တုသားတွေကြောင့် ငါ့ခန္ဓာဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဆိပ်တွေနဲ့ပြည့်ပြည့်လာတယ်။ ငါ့ကိုယ်ငါသိတယ်။ ငါအရင်လို မသန်မာတော့ဘူး။ ငါ့အသက်တွေ ကြီးလာခဲ့ပြီ။ ငါဟာ သူတို့နဲ့ယှဉ်ပြိုင်ပြီး တိုက်ခိုက်နိုင်တော့လောက်အောင် မသန်စွမ်းတော့ဘူး။ အရာအားလုံးဟာ တချိန်ချိန်မှာတော့ အဆုံးသတ်ကို ရောက်ရှိလာကြမှာ ဖြစ်တဲ့အတိုင်း ငါ့အဆုံးသတ်ကို ငါကြိုမြင်နေမိပြီ။
လောကကြီးမှာ မမျှော်လင့်တတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်ဆန်းတွေ ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာ ငါမယုံကြည်ပေမဲ့ အခုတော့ ထင်မထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုနဲ့ငါကြုံတွေ့နေရပြီ။ Laura ကို ငါစတွေ့ခဲ့တော့ မအံ့သြခဲ့ပေမဲ့ သူမရဲ့အစွမ်းကို ငါမြင်တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ ငါအံ့သြသွားခဲ့ရပြီ။ သူမဟာ အခုမှ 11 နှစ်သာသာပဲ ရှိအုံးမဲ့ ကလေးမလေး။ ဒါပေမဲ့ သူမမှာ ငါ့လိုပဲ ငါနဲ့တစ်ပုံစံတည်းဖြစ်တဲ့ အစွမ်းတွေရှိနေပါလား။ သူမဟာ မည်သူလဲလို့ငါတွေးလည်း သဲကွဲတဲ့ အဖြေတော့ မရခဲ့ဘူး။ နောက်မှ ငါသိခဲ့တာ သူမဟာ ငါ့ရဲ့DNA တွေနဲ့ပေါင်းပြီးမွေးဖွားခဲ့တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ဆိုတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ ငါအခုတော့ ဒီကလေးတစ်ယောက်ရဲ့အနာဂတ်ကို ငါ့ဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့လဲရတော့မယ်။ ငါစဉ်ဆက်မပြတ် တောင့်တလိုချင်နေခဲ့မိတဲ့ အချိန်ဟာ မကြာခင်မှာ ငါ့ဆီကို ရောက်လာတော့မယ်။
ငါဟာ အပြင်ပန်းသဏ္ဍာန်အရ သန်မာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ကောင်း ပိုင်ဆိုင်ခဲ့မိမယ်။ ဒါပေမဲ့ ငါဟာစိတ်ဓာတ်ပျော့ညံ့တဲ့ လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ငါဟာ သူတို့ဖြစ်စေချင်ခဲ့တဲ့ လူသတ်လက်နတ်တစ်ခုအဖြစ် ငါ့ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးကို ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးပြီ။ ငါဟာ သူတို့ကို ရှုံးနိမ့််ခဲ့ရတယ်။
ဒီတော့ ယိုယွင်းနေတဲ့ ငါ့ဘဝကြီးကို သင်ခန်းစာယူဖို့ Laura .. ငါ မင်းကို နောက်ဆုံးပြောချင်တဲ့ စကားတစ်ခွန်းကတော့
“Don't be what they've made you.”